Hanti dhowrihii dhawaan xilka laga qaaday oo ka dhawaajiyay arrin la yaab leh (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hanti dhowrihii dhawaan xilka laga qaaday oo ka dhawaajiyay arrin la yaab leh (AKHRISO)
Hanti dhowraha guud ee qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre inay si sharci darro xilka uu haayay uga qaadeen, islamarkaana ay jabsadeen xafiiskiisa.
Nuur Faarax Jimcaale ayaa sheegay inuu haatan diyaarinayo dacwad ka dhan ah madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Kheyre, isagoona ku dooday in xafiiskiisa lagala baxay dokumentiyo qaarkood lid ku ahaa xafiisyadooda, oo sida uu sheegay ku xad-gudbay dowladnimadii dalka.
“Madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Kheyre waxay si sharci darro ah u sheegeen inay xilka iga qaadeen, ciidamada illaalada madaxtooyadda ee ka amar qaata labadoodda ayaa xafiiskeyga jabsaday oo la baxay dokumentiyo iyo agab kale, waana tallaabo ay ugu xad-gudbeen sharciga iyo nidaamka dowliga, iyagoo adeegsanaya awooda ay leeyihiin, waxaana dacwo arrinkaasi ku saabsan u gudbin doonnaa maxkamadda sare ee dalka” Sidaasi waxaa yiri Nuur Faarax Jimcaale.
Ugu damnbeyntii, Nuur Faarax Jimcaale ayaa ku adkeeysanaya inuu weli yahay hanti dhowraha guud ee qaranka, islamarkaana uusan marnaba raali ka noqon doonin in lagu tunto sharciga iyo dastuurka dalka u degsan.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray Nuur Faarax Jimcaale ayaa imaanaya xilli madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Kheyre ay xilkii uu haayay ka qaadeen islamarkaana ay si KMG ah xilkaasi ugu wareejiyeen ku-xigeenkiisa.